Waraysi: Gaashaanle sare Ibraahim Bare - Canjeex oo la aaminsanaa inuu ka danbeeyay xasuuqii jasiira ee 17kii July 1989
Waxa waraysiga SDWO u qaaday Abdirahman Jama isagoo jooga dalka Suuriya, Su,aalahana waxa soo diyaariyey una diray C/Raxmaan SDWO oo aanu ka codsanay inuu su,aalahaas weeydiiyo Mr Canjeex maadaama uu sheegayo inaanu xasuuqaas waxba ka ogeyn.
Waraysigiina waxa uu u dhacay sidan.
1.Magaca. Gashanle sare Ibrahin Cali Barre ( canjeex )
Email . ibrahimanka@hotmail.com
Degen :Dimishiq suuriya
2. Su,aal SDWO- Maxaad wakhtiigaa xukuumadii siyaad barre ka ahayd?
Jawaab Canjeex- Taliyaha guutada labaad ee Taangiyada.
3. SDWO - Maxaad se qaabilsanayd?'
4. SDWO - Habeenkii xasuuqii jasiira, halkeed ku sugnayd?
CANJEEX - Magaalada xamar, xerada Guutada labaad eeTaangiiyada.
5.SDWO - Maxaad u malaynaysaa in laguugu eedeeyay xasuuqan?
CANJEEX - Magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kacdoon shacbi ah oo weyn oo dowlada lagu afgambinayey 14/07/1989 kii,ciidamada xukuumadu waxay u diyaar garoobeen in ay difaacaan xukuumada , sida anigu aan maqlay wasiirkii Gaashaandhiga,Taliyaha xooga,Taliyaha,hogaanka hawlgalinta,Taliyayaasha Ciidamada sida bada,cirka iyo Taliyah kuliyadii jaallle siyaad.
Rag janaraalo ah oo noocaas ah ayaa ciidamada amarka siinaayey.
Aniguna gacan ayaan ka jabnaa waxaanan ku sugnaa xerada guutada labaad ee taangiyada. Habeen ay bishu ahayd 17 saacaduna ahaeyd 23:00 waxaa ila soo xiriiray Taliyaha xooga waxuuna igu amray in aan tago huteel Daamay oo agtiisa dhibaato lagu sheegay ,waxaan u yeedhay laba sarkaal 1)Maxamed cabdilaahi Buraale(ina wilad)Habarjeclo-cibraan-reercigaal-reeraxmed. waxaanu ahaa taliyah hawlgalinta guutada ee guutada labaad ee taangiyada.
Iyo sadex xadhigllle Maxamuud afrax shunuunac (dudble) hawiye.
Waxaana ku idhi askar inoo soo kaxeeya ,sadex baabuur oo biijiiyayaal ah oo ciidan ah ayaan saaranyahay ayaan kaxeysanay waxaan taganay hutel daamay waxaan lakulanay Dahir Cali Daamay oo Maruursade ah lehna huteelka ,waxaa uu noosheegay in aagan xasilooni kajirto ,waxaan markaa kula xidhiidhay fooniyaha una sheegay in aagani xasiloonyahay oo aanu waxba ka jirin, waxa uu igu yidhi utag gaaska afariyo tobnaad 14aad waana booliis milataariyo ,waxaan ku idhi taliye mahagaagsana in ay is tagaan labadan ciidan oo hubaysani oo isla saacadani ah. Waxaad ku sugtaa ayuu yidhi Tarabuunka abaar 12:30-01:00 waa yimaadeen waxaan tagnay dhamaantayo Buuloxuubay o aan naga fogeyn markaa.
Taliyayashii naftoodii ayaa yimid waxay bixiyeen amar ah dhalinyarada reer waqooyiga in la raafo dhanaana la geeyo, markii amarkaais sdiaa ku dhamaadey waxaan ka codsaday taliyaha xooga in aan xeradaydii ku noqdo , waxuuna amar igu siiyey in aan joogo , abaaro labadii habeenimo 2 halkaas ayaa raafkii ka bilaabmay ,qoladii koofiyada guduudu amarkii waa jabiyeen
Waxaanay soo ururiyeen saraakiil sare,odyaal ,ganacasato,maadaama aan meesha joogey aniga iyo sarkaal kii isaaq ,waxaan diidney in dadkaasi la raafo raga ay soo raafeen waxay ahaayeen saraakiil waxaana ka mid ahaa
1-Gaashaanle sare Ibrahim Ruush, Habar awal ciidamada cirka .
2-Gaashaanle sare Xuseen Kharashyare waa garxajis
3-Gaashaanle sare sumuni musse cabdale
4-Cabdilahi caga dable ,Ciidamada Hangashta, Habaraawal
5.Gaashaanble sare Engineer Food , Habaryoonis badhulbahante.
6-Gaaashaanle sare xuseen dheere Habaryoonis
iyo ragbadan oo saraakiil ah oo u badnaa nabadsugida.
Raga ganacasatada ahaa waxaa ka mid ahaa.
1-Xuseen faaraxcade xuseen cimraan iyo rag qaraabadiisa ,rag uu dhalay iyo qaar uu adeero u yahay. Ninkaa iyo wiilashiisa sadex jeer ayay soo qabteen ilaa aan markii danbe aan uga dhigey waardiye ina wiilad oo ahaa taliye ku xigeenkaygii.
Waxaanan u sheegy in uu joogo guriga oo uu waaridye ka noqdo xuseen cimraan. 2:30 habeenimo aniga iyo saraakishii ila socotey waxaanu ku noqonay xeraydayadii. ciidankii kale ee soo raafay dadka iyo baabuurtiiba waxaa loo qaadey xagaa iyo dhanaane sidii uu amarku ahaa.
Raga ciidankaa wadatay waxay ahaayeen labagaashaanle sare:-
2-Taliyaha ciidanka koofiyad casta Diiriye xirsi
Xogta aan ka ogahay intaas ayayey ahayd.
Bishii august 10 keedii hargeisa ayaa la ii bedeley , intii aan la i bedelin ragbadan oo uu ka mid ahaa ina laxwas ale ha u naxariistee ayaan la kulmay.
Nin taliska ciidanka ciidanka asluubta agtiisa maqaaxi ku lahaa oo la yidhaahdo dasaniye DAANIYE oo habar yoonis ah oo ay saxiib ahaayeen cali xaaji gaandi aya yidhi arinta iska reeb inta aanand tegin ka dibna hargeisa ayaan aadey , Hargeisa anigoo jooga ayaa waxaa la yidhi BBC waxaa ka hadley wiilka la yidhi wuxuu ka fakadey xasuuqaa oo yidhi ciidanka canjeex ayaa watey . Sidaas ayaana la iigu eedey .
6. SDWO - Maxaad ka ogayd xasuuqan la sameeyay intii aan lagu dhaqaaqin ka hor?
CANJEEX - Wax aan haba yaraatee ka oogaa majirto.
7.SDWO - Hadii ay run kaa tahay inaad magacaaga nadiifiso, ma kuu qorshaysantahay inaad Somaliland tagto oo aad halkaas ka cadaysid, waa ta qudha ee hadii ay run kaa tahay?
CANJEEX - Intaan joogey Nairobi waxaan la kulmay ragbadan oo isaaq ah , rag ganacsato ah oo uu ka mid ahaa Wardi basbaas ,Dable , Cabdilahi dhakaar, Rgaasi waxay igula taliyeen hategin hargeisa waayo dadkbadan oo dhagaha loo buuxiyey ayaa jira markaa meel adiga kuu amin ah ma aha .
8. SDWO -Hadaba adigu hadii aad leedahay kamaan dabayn xasuuqaas, kolayba nin ciidnka ku dhex jiray baad tahay waanad ogtahay cidii ka danbaysay, markaa si u magaacagu u nadiifoobo yaa ka danbeeyay xasuuqaas?
CANJEEX - Taaasi waxaan qabaa maadaama aan sheegey madaxdii sare ee ciidanka oo uu wasiirku gaashaandhiga iyo kuwii la mid ka ahaa ka mid ahaayeen ay amarkaa bixiyeen iyo ragii askarta watey ee amarka fuliyey in ay iyugu ka danbeeyeen. Nairobi waxaan ku la kulmay gaashaanle sare cabdihire guhaad oo markaa joogey halkii amarku ka soo baxay isaga ayaana ii shegey halka uu amarku ka soo baxay isaga ayaana iyaga aqoon badan arintaa waxaanu joogaa minosto ,
9. SDWO - Maxaa se maraykanku kuugu diiday inaad dalkooda joogto hadii aan waxa cad lahayn?
CANJEEX - Maraykan maanan aadin , waxaanan maray imtixaana [interview] waana lay ogolaadey maalinkiii ay IMS intixaankii u danbeeyey ayaa waxaa qasab ku soo gashay gabadh arab ah si ay u ogato waxaan ku hadlayo sida ay ii sheegn turjumaanadii kale ee meesha mafiyey gabadhaasi waxay warkii siisey rag hargeisa jooga waana raga sawirka iga qadey ee meel walba u ugu direy internett ka.
Isla markiiba madaxii IMS ru wuxuu i siiyey diidmo isagoon i waraysan loyer ayaan qabsadey labadiiba waan dacweeyey oo maxkamad sare ayaan geeyey gabadhii loyer ayey qabsatey waanay inkirtey arintii dadkii ii sheegeyna waa baqeen oo waxay yidhaahdeen markhaati hana gelin arintaasi waxay taala wali maxkamada sare ee kenya ninkii IMS ta ahaa 2 jeer oo ay maxkamada kenya ay marti qaadey wuu diidey waayo wuxuu la lahaa duplatic . markaa walaal inka bbc da ka waramay gurigii uu joogey markii uu fakadey ayuu warkan ka heley , waana mu aamarad dowladeed oo anigu laygu sameeyey . waxaa kel oo jirta in dhamaan ragii aan ka sii daayey ay yidhaahdeen canjeex ayaa naga sii daayey .
SDWO: Gebogebadii maxaad ku soo gunaanadi lahayd warbixintaada?
ANIGOO AH GAASHAANLE SARE IBRAAHIM CALI BARRE waxaan cadeynayaa in aan kiiskaa lug ku lahayan , sarkaalkaa isaaq iyo kaa hawiye ee ila shaqeynayay ,kaa isaaq wuxuu ku jiraa markii iigu danbeysay ciidanka Somaliland ka hawiyena xamar ayuu ku sugan yahay hada.
Waxaa kale oo aan arkey kuwa u dooda xuquuqda bani aadamka ee loo soo direy shirka aldored oo la yidhaah MARTINHILL waxaanan u sheegey in ay Eldored ay joogaan 4 qabiil ee soomaliya u waaweeyn iyo kuwa yar yar ee badhka l yidhah iyo ilaa iyo 60 kii wixii madax ka ahaan jirey soomaaliya hal qof oo igu eedeeyey na oo maxkamad ila taga ka raadi oo oo ay ka jawaabaan laba sababood ama sadex in aan anigu bixiyey amarka raafka iyo dilkaba iyo in aan anigu gacantayda ku diley , waxaanse u sheegeyaa nimanka su laahan i soo weydiiyey hadaan anigu wax laynayey waxaan badbaadiyey kuwaa iyo kuwa kale oo badan iyaguna ragbadan ayaa ka nool markaa waxaan idin weydiinyaa sababta aan u laayey dhalinyarada ee aan u daayey saraakiisha ,madaxda iyotujaarta , waxaan kaloo heley intaa Nairobi joogey gudigii xaalada degdeg ah ee dowladii siyaad barre oo ka koobnaa ilaa 11 nin , sadex ayaa isaaq ahayd oo wasiiro ku jiraan oo janano leh sida Taliyaha poliska Axmed jamac , habarjeclo oo ku sugan maraykan , iyo nin dhalin yaro ah o wasiir ahaa , habar awalna ahaa, waxaan kaloo maqley in aan dowlad u qabatey 5 nin oo golaha baalamaanka ah oo arintaa iyada ah , markaa meel ay ku danbeysay ma garanay arintaasi. Ka dibna dagaalkii ayaa dhacay muqdisho ayaan ku soo qaxay , waanan ka sii qaxay muqdisho intii aan joogey keniya waxaa ka fakadey ilaa 5 shirqool.
1993 xerada qaxoontiga ee kaakuma ayaan ka tegey waxaanan tegey Nairobo waxaan seexdey hotell ku yaala xaafada isley Nr 5 . oo uu leeyahay nin mustafe la yidhaah oo dhulbahante ah 2 habeen ayan seexdey waanan ka tegey, habeenkii aan ka tegey waxaa yimid askar waxaanay toosiyen dadkii oo dhan iyagoo raadinaya canjeex meeyey ana maan joogin ba nairobi oo waxaan ku laabtey xeradii qaxoontiga , 1994 waxaa shirey rag isaaqa oo nairobi joogey waxaa la ururuiyey ilaa 2000 $ si la iigu dilo lacagtaa waxaana loo dhiibey lacagtaas nin la yidhah Cabdi haybe oo Hbaryoonis ah - isxaaq , ka dib baana la yidhi lacagtaa ninkaa ku khaarajiya ,waxaana meesha yimid nin la yidhah sheekhul jabha oo sheekha ceerigaabo ah , wuxuuna weydiiyey oo uu yidhi ilaahay ka baqa oo hubsada arinta , arintii way hubsadeen in arintaasi shirqool ahayd ayaana u soo baxdey arintaasina waxaa ii sheegey ninkii loo xilsaarey ee cabdi haybe oo yidhi ilaahay waxuu kuu soo direy sheekha reer ceerigaabo waxaana lacagtaa iga baxdey 800 shilin oo ku baxdey baadhitaan intii kalena waan celiyey , 1994 waxaa uu ii sheegey ninka la yidhaahdo BLACKI oo ah habarjeclo /adam madoobe oo ah nin siyaasi ah kenya ah. Waxanu qorshaynay anagoo isticmaalaynaya askarta kenya in baabuur aan taariko lahaynkaagala baxno guriga irbad suuxiso ahna kugu dhufano halkaa dayuurad kaa saarna hargeisa kaa dejino, hada laakin si ilaahiye ayay ku baaqatey
Markaa waxaa ila joogey maxamed farax gawamle oo mareexaan ah. Isla sanadkaa 1994 kakumo qoladii reer miyiga ahayd ee isaaqa ahayd ee deegaanka ahayd ayaa qorshasay in la ururiyo lacag dabdeedna la I dilo.
Arintaasna waxa is hortaagay nin nabad doon ah oo habaryoonis ah oo la yidhaahdo CABDILAAHI, arintaa waxaa ii sheegey nin mareexaan ah oo hooyadii habar yoonis tahay oo la yidhaahdo daahir shire.
2001 aya wargeyska jamhuuriya Volume 11 cadadkiisii 1511 ee soo baxay 8 bishii 5aad , wuxuu joornaalkaasi qorey eedeyn been ah isgoo magac been aha adeegsanaya isla markaan nin kii qorey magaciisa ma shegin , isla sidaas oo kale joornaalka maandeeq ee xukuumadu , s4aad cadadka 659 oo soo baxay 01.07.2000 , taasna waxay xaqiijisey in wiilkii sheegey in koofiyad cas ay soo raaftey taasi waxay tusaysaa in aanan anigu ku lug lahayn.
Maalimihii itixadku ka dagaalamayey Gedo ayaa nin itixad ka mid ahaa oo la yidhaah farx xaashi , oo mareexan ah hada Norway jooga ayaan waaan ku idhi maxaad dadka masaakiinta ah ee reer miyiga ah aad u xasuuqeysaan wuxuu igu yidhi adiguba xasuuqbaad samasay waxan ugu jawaabay nin walba danbigiisa ilaahay ayuu la hortagayaa waxanay ahayn 1996,
1998 anigoo xabaalayna nin Nairobi ku dhintey ayaa waxaa ka sheekeeyey arintii jasiira laba nin oo goobtii taagnayd ilaahay arinkii ayey si waadaxa uga sheekeeyeen waxaana u yeedhey faarax xaashi oo goobjoog ahaa , waxaan ku idhi si fiican u dhagayso , si fiican ayuuna u dhagaystay waxaan ku idhi ka waran arintii aad igu tidhi 1996 , raali iga ahow ayuuna yidhi ilaahay ayaad la hortagi ayuuna iigu jawaabey .
Wuxuun yidhi diyaar ayaan u ahay wixii danbe ee suu,aalo ah hadii aanay arintu ahayn qabiil iyo wixii xunba ninkaad necebtahay dusha ka saar. Dimishiqna looyar ayaan ku leeyahay
Waxaa soo waraystay abdirahman jama du,ale
Soo Bandhige: Fu,aad
Bahda Mreegta Farshaxan